HERISETRA GOAVANA :: Lehilahy efatra niara-maty tamin'ny fifanindronana antsy • AoRaha
HERISETRA GOAVANA Lehilahy efatra niara-maty tamin’ny fifanindronana antsy
Nandriaka ny ra tao amin’ny tanàna iray any amin’ny kaominina Ambakirano distrikan’Ambilobe, ny talata lasa teo. Nifamira antsy tamin’ny olona teo an-tanàna ny andian’olona vitsivitsy avy any Ambilobe. Vokany, lehilahy efatra no namoy ny ainy, izay nahitana tovolahy iray, vao roapolo taona. Nisy ihany koa ny naratra.
Tamin’io andro io ihany dia efa niroso tamin’ny fisam­borana olona voatondro ho anisan’ireo nifamira antsy ny mpitandro filaminana. Nitohy ny fisamborana, ny ampitso. Olona dimy, ankehitriny, no voatazona atao famotorana.
Raharaha fananantany no niantombohan’ny herisetra mahery vaika, tamin’io talata io. Nisy olona avy any Ambi­lobe tonga tany Ambakirano, tamin’ny alatsinainy lasa teo, nilaza fa hijery ny tany efa novidian’izy ireo, taona maro lasa izay. Nisy fifamaliana teo amin’izy ireo sy ny fianakaviana tompon’ny tany. Niverina nody ireo avy any Ambilobe.
«Niverina tany Ambaki­rano nitondra olona maromaro ireo milaza ho nividy tany, ny talata. Nitohy ny fifamaliana narahina tabataba ary niafara tamin’ny fifampi­kasihan-tanana mihitsy», hoy ny mpitandro filaminana.
Samy nivimbina antsy
Nambaran’ny loharanom-baovao fa samy namoaka antsy ny an-daniny sy ny an-kilany. Nifanandrina sy nifampitolona avy eo. Nanomboka tamin’ny sivy ora maraina ny ady. Tamin’ny 11 ora antoandro ny mpitandro filaminana no naheno fa misy olona mifamono ao amin’io tanàna io.
Nidina tany an-toerana ny zandary avy any Ambilobe sy Betsiaka. «Nandositra ireo avy amin’ny an-kilany, vantany vao nahita ny fahatongavan’ ny zandary. Olona efatra nitazona antsy misy ra no avy hatrany dia nosamborina noentina halaina am-bavany», araka ny fanampim-pana­zavana.
Taorian’ny fahatogavan’ireo mpitandro filaminana dia lehilahy efatra no hita fa namoy ny ainy nitsirara tamin’ny tany. Avy eo an-tanàna ihany ny roa amin’izy ireo. Naman’ireo avy any Ambilobe milaza ho nividy ny tany kosa ny roa hafa.
Famonoana ankizy Vehivavy iray voasambotra tamin’ ny fahafatesan’ilay zaza, 11 taona
Fanompoam-pirenena An-tsitrapo manomboka izao ny fanaovana miaramila
Loza an-dranomasina Olona roa tsy hita popoka narendriky ny sambo
HERISETRA NITERA-DOZA :: Mpirahalahy voatondro ho nahafaty lehilahy iray